Kpọtụrụ Spdị Spam Bots
Anti-spam bụ nnukwu isiokwu na email. Ndị mmadụ na-anwa idebe igbe mbata ha dị ọcha kemgbe ọtụtụ afọ site na ihe ọ bụla site na iwe ihe ngosi ngwá ọrụ iji mfe junk-mail nzacha na ha anwansi ike maka ụgha-positives. N'ezie, spam na-ezigara ghọrọ nsogbu ka gọọmentị wee banye (were ya) wee dee iwu gbasara ya. Ma, e nwere otu ụdị nke spam nke ka na-na ndị na-amụ anya si enwetaghị… na m na-enwe olileanya na ị ga-enyere m aka.
Ọ malitere dị ka mkpasu iwe, mana ọ toro na nkwụsị azụmahịa niile. Missiondị ntinye ụdị ọ bụla na-akpaghị aka na-ebute ihe na CRM m. Nke pụtara na maka afọ gara aga ma ọ bụ karịa, enwere m ọtụtụ ụzọ na-eduga ịre ndị ụlọ ọrụ SEO ndị nwere ike ịnweta m na peeji nke 1 nke Google. Ya mere, agbalịrị m ịmepụta onye na-emepụta ihe ntanetị nke ụlọ nke ga-amalite ịchọpụta ma kpochapụ ndị spammers ndị a na-enweghị nsogbu nke ụgha. Maka na, ka emechara, ebe m kpọrọ spam asị, asị m ohere furu efu karịa.
Iji bido, esi m ụdị spam ahụ nke m nwere ike iwepụ gaa na ngalaba abụọ:
Ezigbo mmadu nke na-enyefe data ezighi ezi ka o banye na kuki ahu n'azu… ikpe ikpe n'efu, akwukwo ocha efu, ahịa mkpọpu ahịa ọdịnaya, wdg.
Bots ndị na-ariji weebụ na-enyefe njikọta njikọta yana data ezighi ezi n'ụdị ọ bụla ha nwere ike ịchọta.
Ọzọkwa, dịka akụkụ nke obere ọrụ nkwado a (nke ị nwere ike isonye site na ịza ajụjụ ebe a) ka m tinye ihe ndị a: NO CAPTCHA. Enweghị m ike ịgụ ihe dang ahụ n'onwe m ọkara oge ma enwere ihe kpatara ịtụ egwu na CAPTCHA n'onwe ya na-ebelata ntụgharị ndu site na nsogbu naanị.
Yabụ, ihe aghụghọ ahụ bụ imepụta usoro ezi uche dị na ya nke mmadụ ga-agba ọsọ ụdị data ewepụtara nke ga-achọpụta nke ọma spam ọnụọgụ dị ukwuu nke oge ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara igbochi ndu ziri ezi.
Nke a bụ ebe m nọ:
Fanye ntinye n'ime ụdị, pịnye = ederede, mana ụdị = ”ngosi: ọ dịghị;”. Bots ga-etinyekarị uru n'ime oghere ntinye ederede ọ bụla iji gbalịa ịgafe ndị na-enyocha ihe achọrọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a ga-edozi data a na data dị na ya, anyị nwere ike ịmata nke ọma na mmadụ emeghị ya.
Tulee maka “asdf.” Dị Mfe, Amaara m, mana akụkọ banyere spam na-akọ akụkọ ihe mere eme gosipụtara na nke a bụ ụdị ụdị nkwenye ụgha. Ọ bụrụ na eriri asdf apụta na mpaghara ọ bụla, ọ bụ spam.
Lelee maka mkpụrụedemede ikwugharị. Agbalịrị m ma nwaa, mana enweghị m ike iche maka ezigbo ihe kpatara na agwa ọ bụla kwesịrị imeghachi ihe karịrị ugboro 3 na aha, aha ụlọ ọrụ, ma ọ bụ mpaghara adreesị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka m kwenye n'ụzọ ọzọ, ọ dị mma. Ka ọ dị ugbu a, "XXXX Consulting Company" agaghị abụrụ m ụzọ.
Lelee maka eriri yiri. Ndị ọzọ karịa onye agbata obi Tim Allen, Wilson Wilson, ọ dịghị onye m maara nwere otu eriri uru na ngalaba niile nke ụdị ịkpọtụrụ. Ọ bụrụ na ọtụtụ ubi yiri, ọ bụ spam.
N'ikpeazụ, nke a bụ isi: lelee URL si ebe ha na-ekwesịghị. Otu n'ime okwu adịgboroja kachasị adịgboroja bụ itinye URL n'ọhịa ebe ọ na-abụghị nke ya. Na mpụga igbe ederede "ozi", URL ekwesịghị iji aha mmadụ, nọmba ekwentị, aha ụlọ ọrụ, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Ọ bụrụ na ha nwaa ya, ọ bụ spam.
Nyocha 5 ndị ​​a nwere ezi uche belatara ntinye ntinye nke ọma karịa 70% na ọnwa gara aga na anyị free kọntaktị ụdị ngwaahịa. Ọ ga-amasị m ị nweta ọnụ ọgụgụ ahụ karịa. Ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ntinye akwụkwọ spam nke ka na-ezoro ezo na-enye onyinye SEO na-adịghị mma. Yabụ, lee ihe ịma aka na-esote: up nwere ike iwepụta usoro dị iche iche na ụzọ mbata maka njupụta nke ga-egosi n'ụzọ ziri ezi ọdịnaya nke nrubeisi na-ekwu maka SEO? N'ezie, nke a nwere ike ịbụ echiche ọjọọ maka ụmụ okorobịa nọ na SlingShot iji mejuputa na saịtị ha, mana maka anyị niile, ọ ga-adaba.
Ndị mmepe weebụ dị n'otu: olee ihe ọzọ a ga-anwale?
Tags: botskọntaktị ụdị spamụdị spamspam
Ọkt 26, 2010 na 3:59 PM
M hụrụ n'anya n'anya na-agbakwunye ubi na ngosipụta: ọ dịghị. Ọ bụ amamihe! Edere m akwụkwọ ọtụtụ ọnwa gara aga banyere etu teknụzụ Captcha si dị egwu… na-ata ndị aka ha dị ọcha ahụhụ ma na-agbakwunye agbakwunyere ndị ọzọ, enweghị isi maka ndị ọrụ. Ọ bụ nkwenye nke ahụmịhe onye ọrụ. Enwere m ike itinye ubi gị zoro ule!
Ọkt 26, 2010 na 4:00 PM
Ọkt 27, 2010 na 5:06 AM
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana ọ bụrụ na ị tụgharịa ya na ụdị ndị dị ugbu a ọ nwere ike iwe obere oge maka mmetụta propogate. Ndị bọọlụ na-echekwa ụdị gị mgbe niile ziga ya dị ka ha siri hụ ya n’izu gara aga ruo mgbe ha laghachiri wee hụ ya ọzọ. Yabụ, ọ bụrụhaala na ha na-eziga mpempe akwụkwọ gị, ha ga-agabiga. N'ime ihe dị ka otu ọnwa, ị kwesịrị ịmalite ịhụ nsonaazụ.
Jenụwarị 10, 2011 na 8:38 PM
2. O siri ike ịkọ ụdị aha aha;
3. nkesa-n'akụkụ ụdị nkwado;
4. ala ụdị anaghị atụ anya ka ọ baa uru;
# 1 bụ ọkacha mmasị m. Malite ngụ oge dị ka ngwa ngwa peeji nke kọntaktị (ma ọ bụ ibe ọ bụla). N'elu ihe nkesa setịpụrụ oge achọrọ anya iji mejupụta ụdị ahụ. Ọ bụrụ na edoghị anya, onye ọrụ ga-ahụ ozi / akaụntụ nwere nkwarụ / nchịkwa na-anata email / wdg. Ihe a na - ewepu 99.9% nke ụdị ọrụ bot ọ bụla.
# 2 ụlọ ahịa aha ubi na oge na-enye ubi aha enweghị aha. Na-eme ka o siere bot ike ịmụta.
# 3 otu a dị mkpa. Enwere ike ikwenye email n'ụzọ ziri ezi w / okwu mgbe niile, amaokwu nọmba ekwentị kwesiri ịnwe nọmba 10, mpaghara 2 ma ọ bụ karịa w / otu uru = bot, wdg.
# 4 kọwara n'isiokwu gị, 5 na 6 ụfọdụ nhọrọ ederede.
Daalụ maka post, Nick. Ekele maka oke.
Martin - Echere m na ngụ oge bụ nnukwu echiche. Echere m na bot ga zipu ya na ọnụ ụzọ ahụ ga-adị ntakịrị ala… ma eleghị anya 5 sekọnd? Naanị m chọrọ ịma n'ihi ụdị ederede maka ndị ọrụ n'ezie yana ndị ọrụ na-alọghachi na ibe ahụ ma mara ozugbo na ha chọrọ dejupụta ụdị ahụ. naanị mkpụrụ ego penny m abụọ. amaara m na m dị ihe dị ka otu afọ na mbubreyo na post a ka m wee ghara ịtụ anya ọtụtụ nzaghachi, na-etinye ya ebe ahụ na olile anya 🙂